Maamulaha Guud Ee Shirkadda Dahabshiil Oo Ka Hadlay Gurmadka Abaaraha ka Jira Gudaha Dalka Soomaaliya | Araweelo News Network
Hargeysa(ANN)-Maamulaha guud ee shirkada Xawaallada Dahabshiil Cabdirashiid Maxamed Saciid oo waramayay Idaacada VOA ayaa faah faahin ka bixiyay gurmadka abaaraha ka jira gudaha dalka Soomaaliya Iyo doorka ay Shirkad ahaan ku leeyihiin.
‘’Waxyaabaha ugu badan oo aan ka wada hadlay dhamaan dadkii aan is aragnay dabcan waxaa ay aheyd arinta abaarta oo kaliya, sida looga qeyb qaadan karo u gurmadka dadka ay abaartu saameysay, maxaa yeelay dad ayaa jira oo aan warkii oo dhan aan wada heyn, ayuu yidhi maamulaha shirkada Dahabshiil.
Mar uu soo hadal qaaday kaalinta ay ka qaateen dhinacooda gurmadka abaaraha, Wuxuu Yidhi,’’ Waa jirtaa gacan aan arintan ka geysanay, qaar aan lacag ku bixinay iyo kuwa aan raashin u iibinay intaba, gaar ahaan gobollada ugu daran ee abaarta ay ku dhufatay, lacagta aan ku deeqnay waxaa ay gaadhaysaa ilaa $1.5 million oo doolar. Ayuu yidhi C/rashiid DahabShiil.
Waxaa uu sheegay in gaargaar ay u fidinayaa dadka abaarta saameysay ay u sii mariyaan dhamaanba xarumaha ay ku leeyihiin gobollada dalka Soomaaliya si loo hubsado ayuu yidhi in gargaarka la gaadhsiiyay dadkii u baahnaa.
Waxaa kaloo uu intaa ku darray in lacagaha loogu deeqayo dadka dhibaateysan ee la sii maryo shirkada u sameeyaan qiimo dhimis ama mar marka qaar si bilaash ah lacagaha ku xawilaan, taasoo laftirkeeda la odhan karo waa qeyb ka mid ah kaalinta shirkada ay ka qaadaneyso gurmadka abaaraha.
Waxaa uu sheegay in gobollada hadda abaarta ugu sii darray ay ka mid yihiin gobollada Gedo, Baay Bakool iyo deegaanno badan oo ka mid ah koonfurta iyo bartaha oo u baahan in gargaar deg deg ah lala gaadho.
‘’Waxaa fiican si abaarta looga hortago in loo diyaargaroobo biyo xireeno iyo daadadka la qabto oo loo sameeyo meelo togog ah oo ay biyuhu gallaan si marka danbe loogu baxsado ayuu Yidhi ‘’ maamulaha guud ee shirkada DahabShiil.
Ugu danbeyntii, C/rashiid DahabShiil ayaa ka hadlay saameynta ka bixintaan midowga Yurub ee dowladda Britain ayaa sheegay in arinta saameyn badan ku leedahay dadka Soomaaliyeed, gaar ahaan kuwa doonaya in ay dadkooda caawiyaan, madaama qiimaha lacagtii Ingariisku uu hoos u dhac ku yimi.
‘’Arintaasi saameyn weyn ayeey leedahay, gaar ahaan dadka Soomaaliyeed, waad aragtaa oo hadda lacagtii Ingariiska qiimo dhac ayaa ku yimid oo qofkii is lahaa dadkaaga caawi oo wax u dir, hadda sarif wanaagsan kuma helayo lacagta ayuu yidhi C/rashiid M Saciid maamulaha shirkada DahabShiil.